मदिराका सौखिन हरुलाई दु:खद खबर: बजेट आएसँगै आकासियो मदिराको मुल्यो ? कुन मदिराको कति पैसा ? लिस्ट सहित – सुदूरखबर डटकम
मदिराका सौखिन हरुलाई दु:खद खबर: बजेट आएसँगै आकासियो मदिराको मुल्यो ? कुन मदिराको कति पैसा ? लिस्ट सहित
label समाचार प्रकाशक query_builder June, 03 2019
आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६/०७७) को बजेट आइसकेको छ । यसले विभिन्न वस्तुको भन्सारदर र आयकरमा सामान्य हेरफेर गरेको छ । बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयातित वस्तुहरूमाथि केही कडाइ गरेको छ । तुलनात्मक रूपले आयातित वस्तुमा बढी कर लगाइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मदिराजन्य पदार्थको अन्तशुल्क र भन्सारदर केही बढाएको छ । यस्तै व्यक्तिगत आयकरमा पनि केही परिवर्तन गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरको तल्लो सीमालाई केही फराकिलो बनाएको छ ।
मदिराको अन्तशुल्कमा १० प्रतिशतसम्मको शुल्क बढाइएको छ । अल्कोहलको मात्रा हेरेर मदिराजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको छ । सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मदिराको युपी शक्ति र अल्कोहलको मात्राको आधारमा भन्सार र अन्तशुल्क दर बढाइएको छ ।
आयात गरिएको मदिराजन्य पदार्थमा तोकिएको भन्दा एक प्रतिशत पनि बढी परेमा उच्चदरको अन्तशुल्क लगाइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
पहिला ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने छ्याङमा अहिले ४० प्रतिशत बनाइएको छ । तर सरकारले आयातीतभन्दा स्वेदशमै उत्पादित मदिराजन्य पदार्थलाई कम अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ ।
ह्विस्की, रम, भोड्का प्रतिलिटर २ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । पहिला प्रतिलिटर १६०० रूपैयाँ थियो । अल्कोहलरहित बियरमा प्रतिलिटर २०० रूपैयाँ भन्सारदर लाग्छ । जब कि यो १ सय ६५ रूपैयाँ प्रतिलिटर मात्र थियो ।
आर्थिक विधेयक २०७६ मा गरिएको यस्तो छ व्यवस्था